Umoya. Kungani kwakheka, izinhlobo ezikhethekile zomoya nokuthi ulinganiswa kanjani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Umoya. Kungani kwakhiwa, izinhlobo ezikhethekile zomoya nokuthi ulinganiswa kanjani
Sihlale sihumusha umoya njengokuhamba komoya usuka kwenye indawo uye kwenye futhi asikwazi ukuwubona ngaphandle kokuthi uthwele isihlabathi noma izinto zokwakha. Ilukuluku labantu abasemoyeni livela ngokuthi kanjani into esingayiboni ingalinganiswa.
Ngabe bawukala kanjani umoya futhi yiziphi izinhlobo zomoya ezikhona? Ngabe ochwepheshe basuselwa kuphi lapho bebiza umoya ohambayo ngamagama ahlukile?
1 Kungani umoya wakheka?
2 Ulinganiswa kanjani umoya?
3 Ezinye izinhlobo ezikhethekile zomoya
3.1 Umoya wasolwandle
3.2 Kushaywa umoya ezintabeni nasezigodini
Kungani umoya wakheka?
Kunezindlela eziningana lapho umoya ungakhiqizwa khona. Imvamisa, okuvame kakhulu ukuthi kunamaphuzu amabili ezindaweni ezihlukene lapho kusungulwa khona phakathi kwabo umehluko ekucindezelekeni noma emazingeni okushisa. Uma kwenzeka ukuthi kunamaphuzu amabili lapho ingcindezi yehluka khona, izixuku zomoya zizojwayela ukusuka lapho kunengcindezi enkulu ziye lapho kuncane khona. Njengalapho sithatha ithubhu lomuthi wokuxubha, siyacindezela ukwenza ukuthi umuthi wokuxubha uphume udala umehluko wengcindezi. IPasta ijwayele ukugeleza isuke lapho kunengcindezi ethe xaxa iye lapho kunokuncane. Lo mehluko wengcindezi ubizwa ngabezimo zezulu umyela.
Ngoba kunobudlelwano obusondelene kakhulu phakathi komoya nengcindezi, amamephu we-isobar. Lawa mabalazwe e-isobar yiwo amele umehluko wengcindezi wona onikeza imininingwane ngejubane nokuhamba komoya. I-isobars yimigqa enengcindezi elinganayo. Ngakho-ke ebalazweni lapho ama-isobar asondelene kakhulu khona, izositshela ukuthi ibanda, ngoba esikhaleni esifushane, ingcindezi ishintsha kakhulu.
Endabeni lapho umoya wakheke khona ngokwehluka kwamazinga okushisa, kwenzeka okunye futhi. Lapho isisindo somoya sithola izinga lokushisa eliphakeme kunalelo elizungezile, ivolumu yalo iyakhuphuka, okunciphisa ubukhulu bayo. Ngenxa yomphumela we-flotation, ubukhulu bomoya oshisayo buzokhuphuka, futhi indawo yayo izohlala ezinye izindimbane zomoya, ekuhambeni kwabo bazodala umoya. Lokhu kuhamba kwenqwaba yomoya oshisayo nobandayo nakho kuyimvelaphi yeziphepho eziningi zasehlobo, futhi, ngezinga elikhulu, yimimoya evelele ezindaweni ezishisayo zasezindaweni ezishisayo.
Ulinganiswa kanjani umoya?
Umoya ungalinganiswa ngezindlela ezahlukene nangamayunithi ahlukene. Okusetshenziswa kakhulu yile:
Ukukala kwejubane lomoya ovundlile: insimbi esetshenziswa kakhulu i-anemometer izinkomishi, lapho ukujikeleza okufanayo kulingana nesivinini somoya. Iyunithi yokukala yi-km / h noma m / s.
Isilinganiso sokuqondisa: ngoba lokhu kuyasetshenziswa isimo sezulu siyadamba, ekhombisa ukuthi umoya uvelaphi. Sikhuluma ngasenyakatho, empumalanga esenyakatho, eningizimu-ntshonalanga yomoya, njll. kuya ngokuthi ivelaphi.
Ezinye izinhlobo ezikhethekile zomoya
Ngokuqinisekile ngolunye usuku olushisayo lolwandle uzwe umoya omuhle wasolwandle njengoba usondela ogwini. Imvelaphi yayo imi kanjena: Emini, umhlaba ushisa ngokushesha ukwedlula indawo yolwandle, ukuze umoya wangaphakathi uphume futhi uhlale umoya opholile ovela olwandle. Ebusuku, umhlaba uphola ngokushesha kunamanzi, ngakho-ke umoya ongaphezulu kolwandle ufudumele futhi uvame ukukhuphuka, ubangele ukuhamba komoya kusuka ezweni kuya olwandle.
Kushaywa umoya ezintabeni nasezigodini
Kungenzeka futhi uzwe nomoya omusha okhiqizwa ebusuku ezigodini eziningi. Kulokhu, okwenzekayo yilokhu: Emini, umoya osesigodini ushisa ngokushesha futhi uthambekele ekukhuphukeni igquma. Ebusuku, ukupholisa komoya kuyawukhulisa bese kwehlela esigodini kusuka eziqongweni.
Umphumela odabukisayo ongaba nawo isiphepho waziwa kahle kubo bonke, ikakhulukazi uma uthinta izindawo ezakhiwe lapho izindlu nezakhiwo kungakulungele ukumelana namandla omoya angavela. Isiphepho yisimo sezulu esinobudlova esivela olwandle olushisayo, imvamisa ngasekupheleni kwehlobo noma ekuqaleni kokuwa. Imvelaphi yayo isesisindo esifanayo somoya oshisayo nomswakama okhuphuka ngokushesha. Ingcindezi yomoya isatshalaliswa ngokulandelana maphakathi nohlelo futhi ama-isobar ayimibuthano egxilile kakhulu eduze komunye nomunye. Esivunguvungwini, umoya ungafinyelela finyelela isivinini sama-250 km / h yize amanani ajwayelekile kakhulu azungeze i-119 km / h. Maphakathi nesiphepho kunalokho okuthiwa "iso", indawo engenamafu nomoya omncane.
Kuyisiphepho semimoya enamandla ehambisana nokwakheka kwamafu anesiphepho sohlobo lwe-cumulonimbus. Izinkanyamba zingaqala phezu komhlaba noma olwandle ukusuka ekukhuphukeni okusheshayo emoyeni ofudumele kakhulu. Ukuhamba komoya ngesimo sokuvunguza, kukunikeza ukubonakala okujwayelekile komphetho noma umkhono. Ukuvakasha kwakho kwezwekazi kungashuba phakathi kuka-1,5 km no-160 km uma kwenzeka kuba nesiphepho esinamandla. Lokho okukhiqizwa ngaphezulu kolwandle kubizwa ngemikhono yasolwandle. Imimoya ekhiqizwayo icishe ibe yi-180 km / h, yize iziphepho zenzeke ngesivinini esifinyelela ku-500 km / h.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Umoya. Kungani kwakhiwa, izinhlobo ezikhethekile zomoya nokuthi ulinganiswa kanjani
Ukuguquka kwesimo sezulu kubathinta kanjani abantu
Izinyoni zaseTropical zisongelwa ukuguquka kwesimo sezulu